Falanqeyn miisaaniyadda sanadka 2019 loo qorsheeyay hay’adaha garsoorka, adeegyada bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya - Somali Public Agenda
Maalintii ugu dambeysay ee sanadkii 2018, Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2019 ee dowladda federaalka oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Maaliyadda. Wadarta guud ee miisaaniyadda sanadka 2019 ayaa ah $344 malyan. Waxa ay $70 malyan ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkii hore oo ahayd $274 malyan. Waa koror badan marka la barbar dhigo sanadihii hore: miisaaniyaddii sanadkii 2018-ka waxa ay $14 malyan oo kaliya ka badnayd miisaaniyaddii 2017 oo ahayd $260 malyan.
$133.9 malyan – lacagta ugu badan (ama 38.9 boqolkiiba) ee miisaaniyadda – waxa ay ku bexeysaa kharashaadka maamulka ee soo noqnoqda ee ku baxa xafiisyada kala duwan ee dowladda. Qeyb kale oo muhiim ah oo kamid ah miisaaniyadda ($110.8 malyan) waxa ay ku baxeysaa hay’adaha difaaca iyo amniga. Lacag yar oo ah $10.3 malyan ayaa loo qoondeeyay hay’adaha garsoorka. Wadarta lacag gaareysa $50.8 malyan ayaa loo qorsheeyay hormarinta dhaqaalaha iyo bixinta adeegyada bulshada; tan ayaa $11 malyan ka badan miisaaniyaddii sannadkii hore oo $39 malyan lacag ahloo qorsheeyay hay’adaha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada, waana ififaalo wanaagsan.
Tags: Adeegyada Bulshada, Dakhliga Gudaha, Hay'adaha Garsoorka, Miisaaniyadda sanadka 2019, Miisaaniyadda Soomaaliya, Somali Public Agenda, Somalia, SPA
The NGO-ization of Somali public sector Review of Somalia’s 2019 budget for judiciary institutions, public services...